Fiteny portiogey mazava ho azy fa ny filalaovana fitia
Avy eo dia mazava ho azy fa izany dia tsara ny zavatra ilainao. Amin’ny voambolana mpanazatra eo amin’ny lohahevitra:»ny Fitiavana sy ny flirtation»ianao dia hianatra bebe kokoa teny. Filaharan’ireo ny fivoriana fizarana voalohany misy teny sy fomba fiteny izay azonao ampiasaina mandritra ny fivoriana voalohany, mba handray, amin’ny daty jamba, ary koa mba hihazonana ny antso. Ny fahatsapana avy amin’ny fivoriana voalohany dia tena zava-dehibe, ka mila tsy voaomana tsara.
Ny fomba tsara kokoa mba Haneho hafaliana mandritra ny fivoriana. Inona no hevitry ny hoe»mandra-pahatongan’ny fotoana manaraka». Ny valin ireo fanontaniana ireo dia ho hitanao eo izany mazava ho azy. Mampiaraka toerana Mazava ho azy, ny toerana dia hatao ny fivoriana voalohany, dia zava-dehibe. Izay izany dia tsara kokoa ny manendry daty.
Ny mazava ho azy fa hanampy anao koa
Izany hotely, trano fisakafoanana na café, ny fisotroana, na ny fandihizana ary na dia ny asa. Na aiza na aiza ny fivoriana natao, dia ilaina mba hahita ny tsara teny amin’ny teny portiogey. Ahoana no mba hanasa olona ho an’ny kafe, fomba mba hahita ny mahafinaritra fisotroana kafe, toy ny amin’ny chat ao amin’ny mahafinaritra orinasa nandritra ny sakafo atoandro, sy ny maro hafa. Chat efi-trano, ny Fiarahana amin’ny aterineto, antso an-tariby Ho an’ireo izay mampiasa ny solosaina sy ny finday ho an’ny voly, ity fizarana ity dia tena zava-dehibe. Ireo izay lavitra avy amin’ny hafa, ny mazava ho azy fa mety koa ho tena ilaina. Ny fotoana irery ihany no miara-ny tapany farany ny mazava dia mifantoka amin’ny voambolana amin’ny lohahevitra:»miara-Mandeha»,»Manaitaitra», ary»Vatana». Ankoatra izany, dia avereno ny teny rehetra izay ampianarina ao amin’ny lesona teo aloha. Afa-tsy izany, mazava ho azy, dia mahita telo-polo-lesona roa, izay ahitana be dia be ny voambolana momba ny lohahevitra»ny Fitiavana sy ny flirtation». Rehetra ny teny ary ny fanehoana avy mazava ho azy fa izany dia ampiasaina amin’ny zavatra maoderina. Izy ireo dia tena manampy eo amin’ny tena fiainana. Mazava ho azy, rehetra voambolana vakio avy tompon’ny teny. Raha toa ianao ka tsy tapaka mihiaka mafy, avy eo ianao dia hianatra fanononana marina amin’ny teny portiogey
← Ny vady ny matriarchal tanàna any Brezila nanomboka nijery ralehilahy mpampakatra